Nubia Red Magic 3S ga -abata na Septemba ya na Snapdragon 855 Plus | Androidsis
Na Septemba, Nubia Red Magic 3S ga-eme ka ọ bụrụ ọkwa na chipset Qualcomm kachasị ọhụrụ
El Nubia Red Magic 3 Ọ bụ otu n'ime ọkọlọtọ na katalọgụ nke onye nrụpụta China nke nwetara ọ kachasị ama n'ahịa. Cheta na nke a na-eji Snapdragon 855 site na Qualcomm, chipset kachasị ike na katalọgụ nke ụlọ ọrụ America a nke maara nke ọma otu esi enye onwe ya dị ka ihe kwesịrị ekwesị nke njedebe dị elu maka smartphones na nke ahụ Ịgba Cha Cha.
N’izuụka ndị a enwere otutu ịkọ nkọ banyere a Nubian Red Magic 3 ngwaọrụ na nhazi a, o yikwara ka echiche ndị ahụ sitere na obere asịrị na ihe ngosi na-enweghị isi ga-abụ eziokwu, ebe ọ bụ na a ga-enwe usoro nke usoro a na Snapdragon 855 Plus, na ọ ga-abụ Red Magic 3S. Anyị na-ekwukarị banyere nke a n'okpuru, yana ụbọchị ewepụtara ya.
Nanị nke ụzọ teknụzụ nyere Gizmochina nkọwa na Nubia smartphone nke ga-anakpo Qualcomm zuru ezu System-on-Chip aha ya Nubia Uhie Ime Anwansi 3S. Dabere na ihe ọ na-ebipụta, ngwaọrụ arụmọrụ dị elu ga-elekwasị anya na egwuregwu, ọ bụ ezie na nke a bụ ihe anyị nwere ike ikwubi na-enweghị mkpa inwe mmachi ahụ n'uche, ọ bụrụ na anyị maara ihe SD855 + lekwasịrị anya.
Ka anyị buru n’obi na a na-egosi ikpo okwu mkpanaka a dị ka obere mmelite nke Snapdragon 855, ma ọ bụghị n'ihi nke ahụ o siri ike na-anọchi anya ndozi na okwu nke fluidity n'ozuzu na ogbugbu nke egwuregwu, ma nnọọ ndị na-abụghị. Ọ na-egosi ahụmahụ Ịgba Cha Cha ọtụtụ ihe ndị ọzọ ire ụtọ na oru oma maka player ọrụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe colossal ma; maka nke a, ịrụ nnukwu ọrụ pụrụ iche, ndị Snapdragon 865 ga-abia n’oge na-adịghị anya.
Rịba ama nke ahụ Snapdragon 855 Plus chipset kwalite CPU (2.96 GHz elekere ọsọ vs. 2.84 GHz nke SD855 jisiri ike nweta) na GPU (15% ngwa ngwa), mgbe ị na-ejigide ọtụtụ atụmatụ nke mbụ SD855.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Na Septemba, Nubia Red Magic 3S ga-eme ka ọ bụrụ ọkwa na chipset Qualcomm kachasị ọhụrụ
E gosipụtara Xiaomi Mi 9T Pro
Chessplode gbanwere chess ka ọ bụrụ egwuregwu na-eri ahụ na egwuregwu na-atọ ọchị